Eyelash Stand Onye Na-Ahụ Maka Etemeete - Imewe Mmewe
Onye Na-Ahụ Maka Etemeete
Onye Na-Ahụ Maka Etemeete Ihe okike a na-enyocha usoro nke ntutu anya. Onye rụrụ ya na-ele anya nku anya bụ ihe ịchọrọ iji anya gị mee. Ọ na -emepụta nkwụchi anya dị ka ihe ngosi nke ndụ ma ọ bụ ọkwa obere arụmọrụ. Nke a na-egosipụta nnọchi nkwa dị n'ụtụtụ ma ọ bụ tupu ụra, site na itinye nku anya obere oge tupu itinye ya n'ọrụ. Ntutu anya bụ ụzọ isi bu n’uche ihe ihe dị obere so na-enyere ndị mmadụ aka ịna-eme kwa ụbọchị.
Aha oru ngo : Eyelash Stand, Aha ndị na-emepụta ya : Naai-Jung Shih, Aha onye ahịa : Naai-Jung Shih.
Onye Na-Ahụ Maka Etemeete Naai-Jung Shih Eyelash Stand